လူမှားဖမ်းဆီးခံရကာ ထောင်ထဲမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကြောင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမိတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း | Myanmar Cele Tube
Hey Myanmar Cele Tube Community!
Copyright © 2021 Myanmar Cele Tube. All rights reserved.
လူမှားဖမ်းဆီးခံရကာ ထောင်ထဲမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကြောင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမိတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း
Cele News News
မင်းသမီးသိင်္ဂီထွန်းကတော့ တစ်ချိန်ကဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေများစွာမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်တွေကနေ အပီပြင်ဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို့ ပြောရလောက်အောင် အလွမ်း၊အဆွေးဇာတ်ရုပ်တွေမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်း အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ယနေ့အချိန်ထိအလှမပျက်သေးဘဲ နုပျိုလှပနေဆဲဖြစ်တဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေတဲ့ သူမကတော့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်ကြည့်ရင်းဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျမိတဲ့အကြောင်း
ပရိသတ်တွေထံ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ယခုမှာ သူမကိုဖက်ရှင်လန်းလန်းလေးတွေဆင်မြန်းပေးတဲ့ဒီဇိုင်နာက ထောင်ထဲမှာပဲအစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီးဆုံးပါးသွားခဲ့လို့ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျကာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ” ဒီပုံလေးတတ်လာတော့ ဝမ်းနည်းပြီးမျက်ရည်လည်မိပါတယ်ဒီဇာတ်ကားတွက် ကျမရဲ့ဒီဇိုင်နာက လူမှားဖမ်းဆီးခံရပြီးထောင်ထဲမှာ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်သေခဲ့ရတယ်လို့ သိရတဲ့တွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဪ ကျမနှလုံးသား လောကဒဏ်ခံနိုင်ဖို့နုနေပါသေးလား “ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသမီးသိင်္ဂီထွန်းရဲ့ ရိုက်ကွင်းထက်မှာ ဖက်ရှင်လန်းလန်းလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်ရယ်မောခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် ရိုက်ကူးမှုမျိုးကို အားမပေးဘူးဆိုတဲ့ ပိုပို
​မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ သူမရဲ့ အလှတရားတွေထုတ်ပြလိုက် တဲ့ သဇင်ဦး
တော်ရုံမမြင်ဘူးသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ညီအစ်မတွေတစ်စုတစ်စည်းတည်းရိုက်ထားတဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မင်းသား အလင်းရောင်ရဲ့ မလှမပ Snapပုံတွေ ရိုက်ပေးတဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြလာတဲ့ ရွှေသမီး
သူ့ကို အမှုမကြီးကြီးအောင် လုပ်နေတယ်ဆိုကာ ဒါရိုက်တာဝိုင်းကို ဒဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
"လူကတော့ စာအုပ်စင်ရှေ့ စိတ်ကတော့မင်းဆီမှာ"လို့ ဆိုလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းစုရတီစိုး
"စိတ်ကူးတွေထဲမှာ မင်းပဲရှိတယ် 🖤"လို့ဆိုကာ အမိုက်စားစွဲမက်ဖွက် ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ မင်းသမီး‌ချောလေး အိချောပို
"ဆံပင်အတိုလေးလည်းလွမ်းတယ် မန္တလေးကိုလည်းလွမ်းတယ်😕"လို့ဆိုကာ အရင်က ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ သန္တာဗိုလ်
"ပန်းချစ်သူ 🧡🌸"လို့ဆိုကာ အရမ်းလှတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေကြား ကိုရီးယားမလေးတစ်ယောက်လို လှနေတဲ့ ဟန်နာယူရီ